ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဆိုင်ရာ Master Plan အား အသစ်ထပ်မံရေးဆွဲရန် မြန်မာ-ဂျပန် ဆွေးနွေး | Eleven Media Group
ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဆိုင်ရာ Master Plan အား အသစ်ထပ်မံရေးဆွဲရန် မြန်မာ-ဂျပန် ဆွေးနွေး
ထားဝယ်အထူးစီပွားရေးဇုန် စီမံကိန်း တစ်နေရာအား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ဖြိုးဇင်)
ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဆိုင်ရာ Master Plan အား အသစ်ထပ်မံ ရေးဆွဲရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Tateshi HIGUCHI ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်ကြီး .E. Mr. Tateshi HIGUCHI ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ ဇူ လိုင် ၇ ရက်က တွေ့ဆုံရာတွင် ထားဝယ်အထူး စီးပွားရေးဇုန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာ-ထိုင်း-ဂျပန် သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးရေး၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန် ၃၀ ရက်က ကျင်းပခဲ့သည့် အဋ္ဌမအကြိမ် မြန်မာ-ထိုင်း ပူးတွဲညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီ အစည်းအဝေး ရလဒ်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်များ၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပေးအပ်သော အကူအညီများအား ပိုမိုထိရောက်စွာ အသုံးချနိုင်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လယ်ယာထွက်ကုန် သီးနှံများ၏ အရည်အသွေး စီမံခန့်ခွဲမှု အပိုင်းတွင် ဂျပန်နည်းပညာနှင့် အကူအညီများ ပိုမိုရရှိရေးနှင့် ထားဝယ် အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် တနင်္သာရီကမ်းမြောင်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အလားတူ ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်နှင့် ဆက်စပ်ဒေသများ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အဋ္ဌမအကြိမ် မြန်မာ-ထိုင်းပူးတွဲညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် ထားဝယ်အထူး စီးပွားရေးဇုန်ကို မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်ဖက်စလုံးက ပူးပေါင်း၍ အမြန်ဆုံး ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်ရေး၊ ထားဝယ်အထူး စီးပွားရေးဇုန်နှင့် မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ်သို့ ဆက်သွယ်မည့် နှစ်လမ်းသွားကားလမ်း တည်ဆောက်ရေးနှင့် ထားဝယ်အထူး စီးပွားရေးဇုန်၏ ကနဦးစီမံကိန်းအပိုင်းကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ရေး၊ ယင်းလုပ်ငန်း နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် ပူးတွဲအထူးလုပ်ငန်း အဖွဲ့များ ထူထောင်ဖွဲ့စည်းရေးတို့ကို အမြန်ဆုံး အကောင်အထည် ဖော်သွားရန် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန အနေဖြင့် မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အထက်အဆင့်က တာဝန်ပေးအပ် လာသည့်အတွက် တာဝန်ခံ ၀န်ကြီးဌာအဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုတွင် အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ အလွန်အရေးပါကြောင်း၊ ယင်းကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံတော်၏ ရည်မှန်းချက်လေးရပ်၊ စီးပွားရေးမူဝါဒ (၁၂) ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ အနေနဲ့ လောလောဆယ်မှာ သီလ၀ါ၊ ထားဝယ်၊ ကျောက်ဖြူ အထူးစီးပွားရေးဇုန် သုံးခုကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ သုံးခုအနက် သီလ၀ါကတော့ ရှေ့ကိုရောက်နေတဲ့ အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဖြစ်ပါတယ်” ဟု စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်က ပြောကြားထားသည်။ Writer: နီလာ Copyright © 2015 Eleven Media Group Co., Ltd